Rolling Stones sy U2 ao Arzantina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jolay 2018 4:14 GMT
Mikasika an'i Rolling Stones, nasongadina tao amin'ny El Futuro ya llegó avy amin'ny fomba fijerin'ireo mpankafy ny tarika ny kalitaon'ny fampisehoana. Tao amin'ny Professor London Boy (ES), Blog de Manux (ES), sy Alejandrita (ES), nisy ny fiheverana mitovy amin'izany, iray amin'ireo mpankafy nientanentana, izay mora hita ao amin'ny haino aman-jery ankapobeny ihany koa.
Nitatitra ny lohahevitra momba ny zava-nitranga nandritra ny ora maro talohan'ny fampisehoana ny bilaogy sasany, fihetsika izay nataon'ireo olona tsy te-handoa vola nefa te-hiditra tao amin'ny kianja. Pescado Rabioso (ES), sy Intervoz (ES). Tsy maintsy tadidintsika fa nandritra ny fampisehoana voalohany, olona efa ho 5000 no nahavita niditra nefa tsy nandoa vola, tamin'ny fidirana tao amin'ny vavahady fisavàna.
Ao amin'ny Eroticus (ES), etsy ankilany, misy ny fomba fijery roa momba ny fampisehoana Stones goavambe: avy amin'i Rodrigo Fresan ao amin'ny gazety mpivoaka isan'andro Pagina/12 sy avy amin'i Pablo Schanton ao amin'ny El Clarin. Na dia eo aza ny zava-misy fa sokajiana ho toy ny sehatra hisian'ny tsikera mora foana ny tontolon'ny blaogy, dia toa sarotra ny manara-maso ireo fomba fijery hafa momba ireo fampisehoana tamin'ny herinandro lasa ary mikasika an'ny Rolling Stones sy U2 koa izany. Ny fomba fijery mahazatra dia ny iray amin'ireo mpankafy, fomba fijery izay misy fientanentanana sy fahasambarana tahaka ny hatsaran-toetra, saingy matetika tsy mamela fisainana orizinaly loatra.
Mampiseho fanehoan-kevitra maro samihafa sy mazoto kokoa ny U2, indrindra avy amin'ireo mpanao gazety miasa na niasa tamin'ny mediam-baovao Arzantina. Eduardo Fabregat niresaka tsara momba ilay fampisehoana tao amin'ny bilaoginy Pan y Circo (ES), na dia nampiseho fitarainana momba ny ideolojia ara-politika tao amin'ny fampisehoana aza izy (Bono miaraka amin'ny lobaka misy ny sainam-pirenena Arzantina teo am-piandohan'ny fampisehoana sy ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety miaraka amin'ny filohan'i Arzantina Kirchner). Marcelo Figueras kosa nisafidy hahatsiaro ireo hira ary manasongadina ireo resaka politika.Tao amin'ny Korochi (ES), nisy ny fomba fijery manesoeso kokoa natolotra.
Ankoatra ny lohahevitra lehibe momba ny fandaharam-potoana mifandraika amin'ny fitsidihan'ny U2 ​​sy Rolling Stones, dia nisy ireo lahatsoratra marobe mahaliana tao amin'ny bilaogy Arzantina hafa. Roberto Gargarella avy ao amin'ny TP (ES) manakiana ny fankatoavana an-tsonia vao haingana hanova ny Consejo de la Magistratura [Filankevitry ny mpitsara, sy ny tsy fahampian'ny fiheverana ireo ireo tsikeran'ny mpanohitra. Marcos kosa mitaraina momba ny bliaogy izay mamerina fotsiny mamoaka ny votoatim-bilaogin'ny hafa. Nanangana forum amin'ny teny Espaniôla ho an'ireo mpampiasa WordPress koa izy. Mariano Amartino manadihady ny “tantara ratsy” vao haingana teo amin'ny bilaogy sy ny FON. Franco Giménez kosa manontany tena ny amin'izay tokony hatao rehefa misy olona mangataka aminao toro-hevitra momba ny tranonkala. Irene Fernández miresaka momba ny fifandraisana eo amin'ny bilaogy sy ny lahy sy ny vavy.